SCAN CORRECTOR A4 N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Scan Corrector A4 2.01
Ndị ọrụ ụfọdụ nke Microsoft Word ka ha na-agbalị ịgbanwe mpaghara ntanetụ zutere ezughị okè nke nwere ọdịnaya ndị a: "Unvalid unit of measure". Ọ na-apụta na window windo, nke a na-emekarị ozugbo imelite ihe omume ahụ, ma ọ bụ, nke na-adịkarịghị, sistemụ arụmọrụ.
Ihe omumu: Otu esi emelite Okwu ahụ
Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na njehie a, nke na-agaghị ekwe omume ịgbanwe mpaghara ntanetị, anaghị ejikọta ya na editọ ederede. Eleghi anya maka otu ihe kpatara ya, a gaghịkwa ewepu ya site na interface usoro. Kpọmkwem otu esi wepu njehie Okwu "Unvalid unit of measure" anyị ga-agwa ya n'isiokwu a.
Ihe omumu: "Emeela ka usoro a kwụsị" - iwepụ njehie nke Okwu ahụ
1. Mepee "Ogwe njikwa". Iji mee nke a, mepee akụkụ a na menu "Malite" (Windows 7 na mbụ) ma ọ bụ pịa igodo "Nweta + X" ma họrọ iwu kwesịrị ekwesị (Windows 8 na elu).
2. Na ngalaba "Lee" gbanwee ọnọdụ ngosi na "Nnukwu Oyiyi".
3. Chọọ na họrọ "Ụkpụrụ mpaghara".
4. Na windo meghere na ngalaba "Hazie" họrọ "Russia (Russia)".
5. Na windo ahụ, pịa. "Nhọrọ Di elu"emi odude ke idak.
6. Na taabụ "Ọnụ ọgụgụ" na ngalaba "Separator nke akụkụ dum na nke nta" setịpụrụ «,» (nkwanye).
7. Pịa "OK" na nke ọ bụla n'ime igbe okwu na-emeghe ma malitegharịa kọmputa (maka arụmọrụ ka ukwuu).
8. Malite Okwu ma gbalịa gbanwee ọnọdụ akara - ugbu a, ihe niile kwesịrị ịrụ ọrụ.
Ihe omumu: Ịgbanwezi ma gbanwee ọnọdụ ederede na Okwu ahụ
Yabụ naanị dozie okwu ahụ "Unvalid unit of measure". Ka e were ya na n'ọdịnihu ị gakwaghị enwe nsogbu na arụ ọrụ na nchịkọta ederede a.